My freedom: Current Popular Myanmar YouTube Videos
Hello from Bintan^^
ဒီပိုစ့်တက်တဲ့အချိန်လောက်ဆို ကန်ဒီ Bintan ရောက်နေလောက်ပြီပေါ့။ ရေမကူးတတ်လို့ ကမ်းခြေမှာပဲ ငေါင်တောင်တောင် ထိုင်နေမလား... ဓာတ်ပုံတွေပဲ လျှောက်ရိုက်နေမလား မသိဘူး(:P)။ ကန်ဒီသွားနေတဲ့အချိန်မှာ ဖတ်စရာတခုခုရှိပြီး ကန်ဒီ့ကိုသတိရနေအောင် ဒီပိုစ့်ကို Schedule နဲ့တင်ခဲ့တာ xD xD
OMG!!! သွားပြီ သွားပြီ။ အားလုံးမထင်ထားတဲ့အချိန်မှာ ဒီပိုစ့်တင်ပြီး Surprise လုပ်မလို့ပါဆိုမှ တန်းလန်းကြီး Publish နှိပ်မိတယ်။ ပြန်ဖျက်လိုက်ပေမယ့် Notification တွေ တက်ကုန်ပြီ ထင်တယ်။ ကြိုကြော်ငြာဝင်သလို ဖြစ်သွားပြီ >.<
OK OK... ပြန်ဆက်ရရင် ဒီတလော YouTube မှာ နာမည်ကြီးနေတဲ့ ဗွီဒီယိုလေးတွေ ပြန်ရှယ်မလို့ပါ။ မကြည့်ရသေးတဲ့သူတွေ ကန်ဒီမရှိတုန်း အပျင်းပြေကြည့်ရအောင်ပေါ့ ^_^
► ဒီ Music Video အရမ်း အရမ်းရီရတယ်။ သူတို့ က တဲ့စတိုင်လ်ကို အကြိုက်ဆုံးပဲ xD xD
► ဒါကတော့ ဇာတ်လမ်းတိုလေးပါ။ စင်္ကာပူမှာနေတဲ့ မြန်မာတွေရဲ့ Lifestyleကို ဖော်ပြထားတယ်။ နောက်ပြီး ရီလည်း ရီရတယ်။ သရုပ်ဆောင်တဲ့လူတွေလည်း အရမ်းတော်တာပဲ။ ကြည့်ရတာ ဇာတ်လမ်းကဆက်ဦးမယ် ထင်တယ်။ လောလောဆယ်တော့ ဒီတခုပဲ ရှိသေးတယ် :)
► ဒီကလေးလေးကို အားလုံးသိပြီးသားဖြစ်မှာပါ... ချစ်စရာလေး :D
► မြန်မာတွေလည်း အားကျမခံ Oppa Myanmar Style တဲ့ xD xD
See you soon ^_~
စာကြွင်း - အစက စနေနေ့မှ သွားမယ်ဆိုပြီး ခုသောကြာနေ့ညနေသွားမယ် ဖြစ်သွားပြန်လို့ ကမန်းကတန်းရေးသွားသော ပိုစ့်ဖြစ်သည်။ နှစ်ညအိပ် သုံးရက် :D
Posted by Candy at 2:00 PM
Bintan က ပုံရိပ်တွေကို စောင့်မျှော်နေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်း...
Singapore Myanmar life style တော့ စိတ်ဝင်စားလုိ့ သေချာကြည့်ခဲ့တယ်.. သရုပ်ဆောင်တာတွေကောင်းတယ်.. ပီပြင်ကြတယ်နော် :D
Bintan ကနေ မမ ပြန်ရောက်မယ့်နေ့ ကုိုမျှော်နေမယ်နော်
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ပို့စ်အသစ်လေးမြင်တော့ ပျော်သွားရတာပါပဲ ညီမလေးက ချစ်ဖို့ကောင်းတယ်...
မျှဝေခံစားခဲ့ပါတယ် သကြားလုံးရေ ...
I saw you in ferry terminal yesterday :D . we were on the same bus :D
သမီးရှင်ကို သိပ်ခိုက်..... :D
ဟယ်... ဟုတ်လား... ဟီးးးးး ဆုမြတ်လည်း Bintan သွားတယ်ပေါ့ :D :D
အားပေးသွားပါတယ်ဗျာ...ဇာတ်လမ်းလေး ထွက်တာတွေ့ရင် တင်ပေးပါဦး..ရယ်ရတယ်ဗျ... ^_^
အဲဒါကလဲ တစ်ဒုက္ခ..ဒါပေမဲ့ ပို့စ်သစ်တွေကို